Danyawadi Introduction: ဓည၀တီ မိတ်ဆက် စကား | Danya Wadi
»Introduction»Danyawadi Introduction: ဓည၀တီ မိတ်ဆက် စကား
Posted by danyawadi on December 9, 2014 in Introduction
Danyawadi ဆိုဒ်သည် ဝင်ရန် ၅ စက္ကန့်ကြာသည်။ Danyawadi တွင် ဒေါင်းလော့ဒ်လင့်များ ကို
နီညိုရောင်ဖြင့် ဖော်ပြ သည်။ ခေါင်း ကြီးပိုင်း သတင်းများအားအနီရောင်ဖြင့် ဖော်ပြသည်။
Danyawadi ၏ သတင်းရင်းမြစ်အနေဖြင့် မြန်မာမှုခင်းသတင်းများ၊ ရခိုင် အရေး အခင်း၊ မြန်မာ့
ဒီမိုကရေစီအရေးများ ကိုအသားပေးဖော်ပြသည်။ Danyawadi သည် မြန်မာစာဖတ်ပရိသတ်
များအတွက် ပညာပေး ဆောင်း ပါး များကို အသားပေးရေးသားလေ့ရှိသည်။ Danyawadi တွင်
မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦး ပြစ်မှု ကျူးလွန် ခြင်းမရှိ ဟု ထွက်စာ ကို ထိုင်းအစိုးရရှေ့နေ့ရုံးများသို့ ပေး
ပို့သောသတင်းများ ကိုရေးသား ဖော်ပြ ထား ပါ သည်။
Danyawadi သည် သတင်း ရင်းမြစ် များကို ကိုယ်ပိုင် သတင်းထောက်များဖြင့် ရေးသားလေ့ရှိ သလို ကော်ပီကူးယူဖော်ပြလျှင်လည်းမူရင်းရေးသားသောဆိုဒ်များကို credit ပေးလေ့ရှိသည်။
Danyawadiတွင် Burmese Version , English Version , Dictionary , Movie ,Discovery,
Special , General စသဖြင့်ကဏ္ဍများ၊ category များခွဲခြား ထားခြင်း ရှာဖွေရန်Search Box ကို
လည်း ပေး ထား ခြင်း ကြောင်း အတိတ်က သတင်းဆောင်းပါးများ ကိုအလွယ်တကူရှာဖွေလေ့
လာ နိုင်ပါ သည်။
ထို့ ကြောင့် Danyawadi သတင်းရင်းမြစ်သည် ယုံကြည် စိတ်ချ ရသည်။
Danyawadi is Burmese political website. Danyawadi enables to read in both Burmese and English. Danyawadi provides world news, local news, breaking news and other news. Danyawadi also gives Myanmar crime news, Rakhine Conflicts, and other trending topics in Myanmar. Danyawadi also writes educational articles on Danyawadi’s webpage. Danyawadi either writes the articles it publishes on its own or it shares the news from several other popular online magazines with all due proper credits. Danyawadi isavery informative website.
← အနှိပ်ခန်းနှင့်ကေတီဗွီများတရားဝင်ခွင့်ပြုပေးရန် လွှတ် တော် တွင် တိုက် တွန်း
ရန်ကုန်မြို့တော်လမ်းမကြီးများနှင့်ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသူ၊ မြန်မာစကားမတတ်သည့်ပြည်ကြီး ပေါက် ဖော် များ။ →